नौ जनाले जिम्मेवारी पाउँदा दुईको खोसियो ! – Dullu Khabar
नौ जनाले जिम्मेवारी पाउँदा दुईको खोसियो !
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु हेरफेर गर्दा राज्यमन्त्रीसहित नयाँ नौ जना अनुहारले जिम्मेवारी पाएका छन् भने युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा पद्मा अर्यालले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । शिवमाया तुम्वाहांफे कानुनबाट भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेकी छन् ।